Xog: Xukuumadda Khayre oo bari qorshaynaysa in Fowdo laga dhex abuuro Fadhiga Baarlamaanka, Akhriso Faahfaahin. – Hornafrik Media Network
Raiisul Wasaare, Xasan Cali Khayre ayaa Caawa abaabul ugu jira in Fadhiga Baarlamaanka ee Barri la fowdeeyo, kadib markii ay u soo baxday inuusan Kalsooni ka dhex helayn Baarlamaanka.
HornAfrik waxay ogaatay in illaa iyo 20 Xildhibaan oo taabacsan Go’aanka Xukuumadda ay u tageen Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia, Maxamad Cusmaan Jawaari, kana dalbadeen inuusan Ajandaha ku soo darin Arrinta Qalbidhagax, balse waxa uu ku wargaliyay in la go’aamiyay in Ajandaha Koowaad ay noqoto arrintaas, isna uusan waxba ka badali karin, Waxayna ugu hanjabeen in Fadhiga Bari uu noqon doono mid gacan ka hadal isku badala.
20-kan Xildhibaan oo qaarkood ay Wasiiro yihiin ayaa marka Fadhigu furmo, lana sheego in Ajandaha ay ka mid tahay Arrinta Qalbidhagax waxay ka billaabi doonaan Gudaha Xarunta Golaha Shacabka Buuq, iyo Gacan ka hadal. Waxayna isku dayi doonaan Jawiga Hoolka Baarlamaanka inay u badalaan Goob Fowdo ah.
Sidoo kale Xukuumadda Khayre waxay diyaarisay Qaxootiga ku jira Xeradda Barakacayaasha ee Zayidka oo Caawa loo qabiyay qofkiiba Boqol Kun oo Shilin Soomaali ah, kuwaas oo iyagana loogu talagalay inay dhagax tuur ka billaabaan Banaanka Xarunta Golaha Shacabka, iyagoona isku dayi doona inay xoog ku galaan Xarunta Golaha Shacabka, marka ay Illaaladda Baarlamaanka iyo Xildhibaanaddu isku dayaan inay caliyaana, waxaa la qorsheeyay in Dhar Cad Nabadsugid ah oo ku hubaysan Bastooladda ay billaabaan Rasaas si waxyeelo u soo gaarto Shacabkaasi, kadibna wixii meesha ka dhacay loo saariyo Xildhibaanadda Baarlamaanka, kuwooda ka soo horjeeda Go’aanka Xukuumadda.
Qorshayaashan ayaa ah dhamaantood Xeeladdo ay doonayso in Xukuumadda Somalia ay kaga baxsato in lala xisaabtamo. Maadaama ay ogaadeen inaysan Kalsooni ka dhex heli karin Baarlamaanka oo si wayn uga caraysan Talaabadda Muwaadinka Soomaaliga ah loogu dhiibay Dowladda Itoobiya.